ဘလော့ မှတ်စု: ကညင်ကုန်းကျေးရွာ မီးစက်အလှူခံ အောင်မြင်စွာပိတ်သိမ်းခြင်း
ကညင်ကုန်းကျေးရွာ မီးစက်အလှူခံ အောင်မြင်စွာပိတ်သိမ်းခြင်း
သဒ္ဓါကြည်လင် စေတနာရှင် အလှူရှင်အပေါင်းတို့ ခင်ဗျာ…..
ဦးဇင်းအရှင်ဝိမလ၀ံသမှ ဦးဆောင်၍ ဧရာဝတီတိုင်း၊ ကျောင်းကုန်းမြို့နယ်၊ ၀က်ခြံဂယက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကညင်ကုန်းကျေးရွာလေး အတွက်မီးပေးနိုင်ရန် မီးစက်အလှူကို ( ၁၁. ၀၄. ၂၀၁၂ ) ရက်နေ့တွင် ကျွန်တော်တို့ စတင်ပြီး အလှူငွေများ ကောက်ခံခဲ့ပါတယ် ခင်ဗျာ… ။ အလှူရှင်များရဲ့ ထက်သန်တဲ့ စေတနာသဒ္ဓါ တရားကြောင့် လိုအပ်နေတဲ့ မီးစက်အတွက် အလှူငွေများကို အချိန်တိုအတွင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ် ခင်ဗျာ…။ မီးစက်အလှူအတွက် ကုန်ကျမယ့် အလှူငွေမှာ ကျွန်တော်တို့ ယခင် ခန့်မှန်းထားတာထက်ပိုပြီး ကျွန်တော်တို့ ကောက်ခံရရှိခဲ့တဲ့ အတွက် အင်မတန်မှကို ၀မ်းသာပီတိလည်း ဖြစ်မိပါတယ်ခင်ဗျာ… .။
ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ ဒီမီးစက်အလှူကို မေလကုန်ပိုင်းမှာ အပြီးသွားရောက်လှူဒါန်း ရေစက်ချမယ်လို့ ယခင်က စီစဉ်ထားခဲ့ပါတယ်….။ ဒါပေမဲ့ ဒီကညင်ကုန်းကျေးရွာ မီးစက် အလှူကို စတင်ပြီး ဦးဆောင်ပေးတဲ့ ဦးဇင်း အရှင်ဝိမလ၀ံသမှာ စာမေးပွဲကြောင့် မေလထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံ ကို ပြန်လို့မရတာမို့ အလှူအတွက် အချိန်အနည်းငယ် နောက်သို့ရွေ့လိုက် ရပါတယ်ခင်ဗျာ…။ ဦးဇင်း အရှင်ဝိမလ၀ံသ လက်ရှိဖြေဆိုနေသော Ph.Dဝင်ခွင့် ရေးဖြေစာမေးပွဲ ပြီးဆုံးသွားပြီ ဖြစ်ပေမဲ့နောက်ထပ် နှုတ်မေး နှုတ်ဖြေစာမေးပွဲကတော့ ဇွန်လ ၈ရက်နေ့မှသာ ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျာ…။ ဒါကြောင့် ဦးဇင်းအနေနဲ့ စာမေးပွဲအပြီး ဇွန်လ ၁၁ ရက်နေ့မှာ မြန်မာနိုင်ငံသို့ အရောက်ပြန်ကြွမှာ ဖြစ်ပြီး မီးစက်အလှူအတွက် ဇွန်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ရေစက်ချလှူဒါန်းပေးမှာ ဖြစ်ကြောင်းပါခင်ဗျာ…။
မီးစက်အလှူအတွက်ပြီးမြောက်၍ ပိုလျှုံလာသော အလှူငွေများကိုလည်း ထိုကျေးရွာလေးမှာပင် ထပ်မံပြီး အလှူအတန်းတခုခု ကိုပြန်လည်ပြုလုပ်ပေးမှာ ဖြစ်ကြောင်းလည်း အလှူရှင်များကို ကြိုတင်အသိပေး အကြောင်းကြား အပ်ပါတယ် ခင်ဗျာ…။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကညင်ကုန်းကျေးရွာ မီးစက်အလှူအတွက် အလှူငွေကောက်ခံခြင်းကို ( ၁၁. ၀၅. ၂၀၁၂ ) ရက်နေ့တွင် အောင်မြင်စွာဖြင့် ပိတ်သိမ်းမှာဖြစ်ကြောင်း စေတနာရှင် အလှူရှင်များနှင့် တစ်ကွ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများ အားလုံးကို အသိပေး အကြောင်းကြားအပ်ပါတယ် ခင်ဗျာ….
ယခု ပြုလုပ်သော ကညင်ကုန်းကျေးရွာ မီးစက်အလှူလေးအတွက် အဖက်ဖက်မှ စေတနာသဒ္ဓါတရား ထက်သန်စွာဖြင့် ၀ိုင်းဝန်းလှူဒါန်းပေးကြသော အလှူရှင်များကို ကညင်ကုန်းကျေးရွာသူ/ သားများကိုယ်စား ကျွန်တော်တို့ အလှူဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့မှ ညီအကိုမောင်နှမများက အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ရိုသေလေးစားစွာဖြင့် ပြောကြားလိုပါ တယ်ခင်ဗျာ…။ ကျွန်တော်တို့ လက်ခံရရှိထားတဲ့ အလှူငွေစာရင်းများနှင့် အလှူအတွက် ကုန်ကျငွေ စာရင်းများကိုလည်း အလှူပြီးတာနဲ့ တပြိုင်နက် တင်ပြပေးသွားပါမယ် ခင်ဗျာ…။
ကျွန်တော်တို့ လက်ရှိ ကောက်ခံရရှိထားတဲ့ ငွေပမာဏမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ…။ အလှူအပြီးမှာတော့ ကျွန်တော်တို့ လက်ခံရရှိပြီး အလှူငွေစာရင်းနဲ့၊ ကုန်ကျငွေ စာရင်းအစုစုတို့ကို အလှူရှင်များထံ ပြန်လည်တင်ပြပေးမှာ ဖြစ်ကြောင်း ထပ်မံအသိပေး အကြောင်းကြားအပ်ပါတယ် ခင်ဗျာ…
၁။ မြန်မာကျပ်ငွေ ၂.၀၈၃.၀၀၀ိ/ ( ကျပ် )
စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၁၄၉၈ ( ဒေါ်လာ )
၃။ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၀၀ ( ဒေါ်လာ )
မလေးရှားရင်းဂစ် ၁၅၈၀ ( ရင်းဂစ် )
ဒိန်းမတ်ခရိုနာ ၂၇၀၀ ( ခရိုနာ )
အင်္ဂလန် ပေါင် ၂၀၀ ( ပေါင် )
အိန္ဒိယ ရူပီး ၁၀၀၀ ( ရူပီး )
အလှူရှင်အမည် နှင့် စာရင်းများကြည့်ရန်
တို့ကို ကျွန်တော်တို့ လက်တလော ကောက်ခံရရှိထားပါတယ် ခင်ဗျာ...။ အသေးစိပ် စာရင်းများကိုတော့ မကြာမှီ အချိန်အတွင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ တင်ပြပေးမှာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားရင်းနဲ့ ကညင်ကုန်းကျေးရွာ မီးစက် အလှူအတွက် အလှူငွေ ကောက်ခံခြင်းကို ( ၁၁. ၀၅. ၂၀၁၂ ) ရက်မှာ အောင်မြင်စွာဖြင့် ပိတ်သိမ်းမှာ ဖြစ်ကြောင်း ထပ်မံ အသိပေး ကြေငြာ အပ်ပါသည်ခင်ဗျာ....
စေတနာရှင် အလှူရှင်များနှင့် သူငယ်ချင်း ညီအကိုမောင်နှမတွေ အားလုံး
Posted by ရာဇာထွေး at 1:37 AM
ရင်ဆူး May 9, 2012 at 8:35 PM
အလှူရှင်များတွေရဲ့ ကောင်းမှု့တွေကို သာဓုခေါ်သွားသလို ၀မ်းသာပီတိလည်းဖြစ်ရပါတယ် အစ်ကိုရေ.......
mstint May 10, 2012 at 1:06 PM
ဒီကနေ့ တီတင့်လည်း အုတ်တစ်ချပ် သဲတစ်ပွင့် ပါဝင်လှူဒါန်းသွားပါတယ် မောင်ရာဇာရေ။
အလှူရှင်တို့ရဲ့ ပြုပြုသမျှ ဒါန သီလ ဘာဝနာ ကုသိုလ်အစုစုတို့အတွက်လည်း သာဓု သာဓု သာဓု ခေါ်ဆိုသွားပါတယ်။
ရာဇာထွေး May 10, 2012 at 10:10 PM
ကွန်မန့်လေးတွေအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ညီလေး ဆူး
နဲ့ အန်တီတင့် ခင်ဗျာ .... အလှူအတွက် တဖက်တလမ်း
ကနေအားဖြည့်ကူညီပေးတဲ့ အန်တီ တင့် ကိုထပ်ပြီး ကျေးဇူး
စံပယ်ချို May 11, 2012 at 4:52 PM
ကိုရာဇာတို့လဲ အများအကျိုးတွေ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေလို့
Maribel Artaste July 13, 2012 at 10:58 PM